Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay hay’adaha maaliyadda Dalka. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay hay’adaha maaliyadda Dalka.
written by warsan radio 13/09/2021
1-Link-ga Muuqaalada kulanka Ra’iisul Wasaaraha iyo hay’adaha maaliyadda https://we.tl/t-QjnqKc0G0y 2-Link-ga Codka Guddomiyaha Bangiga dhexe, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullahi. https://we.tl/t-Upc1wiLv90
Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay hay’adaha maaliyadda Dalka. was last modified: September 13th, 2021 by warsan radio
Dhageyso:Maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa kulan laqaatay qar ka mid ah hay’adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan